Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo is badal ku samayn doona.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo is badal ku samayn...
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo is badal ku samayn doona..
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu saxiixo dhowr digreeto saacadaha ugu horreeya, marka xilka loo caleema saaro Arbacada soo socota.
Sida uu sheegay ninka uu u xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha Aqalka Cad, Biden ayaa amarrada madaxweyne ee uu saxiixi doono Arbacada ay intooda badani noqon doonaan kuwo uu ku burrinayo amarro uu horay saxiixay madaxweyne Donald Trump.
Kuwa ugu horreeya uguna waa weyn ayaa waxaa ka mid ah laalista xayiraada socdaalka ee uu Trump saaray dalal dhowr ah oo intooda badani Muslimiin ah oo Soomaaliya ay ku jirto.
Waxaa sidoo kale digreetooyinka ka mid ah kuwa lagu amrayo dib ugu laabashada heshiiska cimilada ee Paris, iyo inuu waajib ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhamaan xarumaha dowladda federaalka.
Biden iyo ku xigeenkiisa, haweeneyda la yiraahdo Kamal Harris ayaa la wareegi doona talada xafiiska Aqalka Cad ee looga arrimiyo Mareykanka 20-ka bishaan oo ku beegan Arbacada soo socta.
Madaxweyne Trump ayaanan ka qeybgali doonin xafladda caleema-saarka madaxweynaha isaga baddali doona.
Previous articleMadaxweynaha la doortey Joe Biden oo Arbacada tago doona Aqalka Cad waxa uu bedeli doonaan dhowr ka mid ah siyaasadihii madaxweyne Donald Trump.
Next articleMagaalada Jigjiga oo laga soo sheegaya in hilibka xoolaha gaar ahaan hilibka geela oo aad ugu yaraaday magaaladaas.
USA oo soo dhoweeysay tallaabadii madaxweyne Farmaajo iyo Golaha Shacabka
Qoraal ay barta twitter-ka soo dhigtay Safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayey ku soo dhoweysay go'aannadii madaxweynaha iyo Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. "Waxaan soo dhaweyneynaa...
Wasaarada Difaaca Somaliya oo mushaarkii ka jartay Ciidamada ilaaliya mucaaradka
Mareykanka wuxuu ka soo horjeedaa Muddo Kordhinta Dowladda Federaalka ee Somaliya
Maxaa ka ka dhacay garoonka Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerar loo adeegsaday qaraxyo dad badani...
Alshabaab oo lagala wareegay deegaan muhiim ah
Ciidamada Jeneraal saadaq joon oo isku fidiyay Degmada Hodon iyo...
Wakiilka cusub ee UNICEF ee Soomaaliya oo Warqadihii aqoonsiga laga gudoomay
War Ded De ah.. Bayaan ka soo Baxay Golaha dhalinyarada Beesha...
Mohamed Abdullahi Mohamed - March 27, 2021 0